Waxaad tahay qof xiiseeya ciyaarta fiidiyowga waxaadna kasbatay khibrad badan oo ku saabsan "furan" tartamada tooska ah. Marka waad maqasheen DreamHack, oo ah hay'ad caan ah oo bixisa tartamada internetka ee loogu talagalay ciyaaraha sida Fortnite, oo aad jeclaan lahayd inaad isku daydo inaad kaqeyb gasho; hase yeeshee, kama heli kartid badhanka diiwaangelinta websaydhka rasmiga ah. Marka waa runtaa?
Waxaan xaqiijinayaa in badhanka aad raadineysaa uusan had iyo jeer joogin, waana wax caadi ah. Isdiiwaangelinta DreamHack badanaa waxay u horseedaa ciyaartoy inay sugaan, waana sababta aan isugu keenay casharradan, kaas oo aan ku sharxi doono xaqiiqooyinka oo aan kugula socon doono tallaabooyinka aad iskaga diiwaangelinayso dhacdada ciyaaraha internetka.
Marka hadaad iskudayeyso inaad fahanto sida loo diiwaan geliyo DreamHack waxaad timid meeshii saxda ahayd. Haddii aadan maqaarka ku sii jirin, qaado daqiiqado yar oo firaaqo ah oo naftaada u raaxee si aad si taxadar leh u aqriso macluumaadka aan ku qoray cutubyada soo socda. Akhris wanaagsan iyo inta badanba, baashaal!
Sida loo diiwaan geliyo DreamHack Fortnite
Sida loo diiwaan geliyo DreamHack Duos
Kahor intaanan gaadhin wadnaha hagaha, waxaan rabay inaan ku siiyo macluumaad hordhac ah DreamHack. Waa inaad ogaataa in ururkan taariikhiga ahi yahay mid kamid ah dhiirrigeliyeyaasha ugu caansan dhacdooyinka ciyaarta abaalmarinta heer caalami ah. Waxay soo uruurisaa kaqeybgalayaasha adduunka oo dhan waxayna qabataa dhacdooyinka maxalliga ah ee Yurub iyo Mareykanka labadaba, in kasta oo xilligan dhacdooyinka badankood lagu qabto khadka tooska ah.
Dhacdooyinka ay abaabushay DreamHack waxaa ka mid ah iidda, shirarka soconaya 3 ilaa 4 maalmood oo kaqeybgalayaashu ay tahay inay keenaan qalabkooda shaqsiyadeed, sida kuwa ay wataan kombiyuutarka shaqsiga, ka Kormeerka, ka jiirka iyo keyboard, si loogu tartamo tartamada maalinlaha ah. DreamHack waxay siisaa mid kasta oo ka mid ah miis, kursi, xarig koronto, iyo fiilada Ethernet si loogu xiro ciyaartoyda shabakadda.
ka Tartamada khadka tooska ah waa dhacdada ugu baahsan uguna fudud ee la heli karo; Kuuma baahna inaad jir ahaan uga guurto gobol kale waxayna kuu fidiyaan abaalmarinno lacag ah oo aad u soo jiidasho badan. Haddii, sidaan u fahmay, aad xiisaynayso, ogtahay inaad ka qaybqaadan karto suugaanyahan ama koox ahaan u tartan. Dhammaan waxay kuxirantahay nooca dhacdada iyo ciyaarta. Sikastaba, si aan fikrad kaaga siiyo cinwaannada xiiseynaya tartamada, waxaa ka mid ah: League of Legends, Starcraft 2, Warcraft 3, Fortnite iyo inbadan.
ka tartamada farshaxanka dijitaalka ah halkii, waxay tijaabiyaan hal-abuurka si loo abuuro waxyaabaha ugu fiican ee dhijitaalka ah, sida: Foto, Sawirada, Noocyada 3D, video mi muusikada. Tani waa mid ka mid ah dhacdooyinka bixiya muuqaalka ugu badan oo iftiiminaya kartida kumanaan kun oo hal-abuur dhalinyaro ah oo adduunka oo dhan ka socda.
L 'EXPOugu dambeyntiina, waxaa loo abaabulaa iyada oo lala kaashanayo xafladaha ama inta lagu jiro dhacdooyinka u baahan ka-qaybgalka maxalliga ah ee cayaartoyda. Bandhiggu waa qayb ka mid ah goobta ay ku yaalaan noocyada ugu waaweyn ee soo saarayaasha qalabka kombuyuutarka sida Intel, AMD, Razer mi Master meeldhexaadka ah, (kaliya in la magacaabo qaar ka mid ah) waxay soo bandhigaan wax soo saarkooda hadda iyo wararka diiradda saaraya ciyaaraha xirfadleyda ah.
Markaan samayno dhismayaasha lagama maarmaanka ah ee kor ku xusan, waxaan u dagi karnaa ganacsiga. Waxaan sharad in aadan fahmi karin sida loo diiwaan geliyo DreamHack. Hagaag, waa inaad ogaataa inay jiraan dhowr siyaabood oo tan lagu sameeyo, laakiin mid kasta oo iyaga ka mid ah waxaa lagu heli karaa oo keliya casuumaad dadweyne; taasi waa, waa inaad sugto DreamHack si ay ugu dhajiso xiriirka diiwaangelinta khadka tooska ah si aad uga qeyb gasho tartankooda. Nasiib darrose, ma jiro diiwaan galitaan joogto ah iyo habka ugu wanaagsan ee aan looga maqnaan karin ballantan waa in la raaco boggooda rasmiga ah ee bulshada.
Channel-ka rasmiga ah ee loo yaqaan 'Discord channel' ee DreamHack ayaa ah hab fiican oo lagula socon karo dhacdooyinka soo socda ee loo qorsheeyay sanadka hadda socda. Markay dhacdo soo dhowaato, DreamHack waxay daabacdaa isku xirka diiwaangelinta qaybta #announcements. Sababtaas awgeed, waxaan kuu soo jeedinayaa inaad ku xeel dheeraato sida Discord u shaqeeyo (haddii aadan horey u lahayn), booqo channelka rasmiga ah ee DreamHack oo dhagsii raac, oo ku yaal salka Discord, si aad uga hesho ogeysiisyo qeybta aan soo sheegnay "waqtiga dhabta ah".
Hab kale oo ammaan ah oo wax ku ool ah oo lagu heli karo xiriirka diiwaangelinta tartanka DreamHack waa in la raaco boggooda rasmiga ah ee Twitter. Boggan, DreamHack wuxuu ku daabacaa waxoogaa yar: laga bilaabo wararka adduunka ilaa twitter bogagga kale, laakiin dhawr toddobaad ka hor dhacdada loo qorsheeyay, DreamHack waxay dhajin doontaa isku-xirka diiwaangelinta ee ay wada heli karaan dhammaan. Haddii aadan aqoon sida Twitter u shaqeeyo, akhri casharrada aan ugu talagalay adeegga.
Hab kale oo lagula socon karo dhacdooyinka DreamHack isla markaana loo helo tilmaamo ku biirista tartanka soo socda ayaa ah ka mid noqoshada liiska boostada ee DreamHack. Ciyaaraha ESL GmbH, kaas oo u soo diri doona ogeysiin emayl ah sheeko kasta oo la daabaco, oo ay ku jiraan dhacdooyinka DreamHack ee soo socda. Waxaad ku sameyn kartaa adoo buuxinaya foomka aan hadda isku xiray.
Dariiqa ugu dambeeya ee aad iskaga diiwaan gelin karto DreamHack waa inaad gacanta ku raacdo cusbooneysiinta websaydhka rasmiga ah. Tani waa habka ugu wax ku oolka yar ee dhammaan, maxaa yeelay waa inaad gacanta ku dhigtaa goobta si aad u hubiso, usbuuc ilaa usbuuc, haddii ay jiraan wax war ah iyo haddii bogga loogu talagalay dhacdada soo socota ay la muuqato dhammaan faahfaahinta iyo taariikhaha, oo ay ku jiraan badhanka diiwaangelinta .
Haddii ujeeddadaadu tahay inaad kaqeybqaadato cidlo tartan ka mid ah Fortnite, markaa macluumaadka aan ku qoray cutubkan adiga ayaa kugu habboon.
Hadaad rabto inaad ogaato sida loo diiwaan geliyo DreamHack Fortnite, waa inaad marka hore haysataa a Xisaabta Ciyaaraha Epic ansax ah: waxa guud ahaan looga baahan yahay inuu ciyaaro Fortnite. Qasab maahan inaad mid yeelato isla markaaba ama inta lagu gudajiro wajiga diiwaangelinta tartamada, laakiin haddii aadan dhameystirin tillaabadan kahor waqtiga bilowga ee dhacdada dhul weynaha, waa lagaa reebayaa tartanka.
Dareenkaan, haddii aadan wali laheyn xisaab isla markaana aad jeceshahay inaad hada sameysato, waxaan kuu soo jeedinayaa inaad aqriso hagekeyga oo dhameystiran oo faahfaahsan oo aan ku sharaxayo sida loo abuuro xisaab Epic Games dhowr talaabo oo fudud.
Kadib helitaanka koontada Ciyaaraha Epic, waa inaad si joogto ah ula socotaa bogga rasmiga ah ee DreamHack ee laxiriira dhacdooyinka loogu talagalay ciyaarta Fortnite. Haddii ay jiraan dhacdooyin soo socda, waxaad arki doontaa xogta waxqabadka iyo badhan aad ku gasho qoritaanka. Laakiin siyaabaha ugu wax ku oolka ah ee loo cusbooneysiin karo loona helo isku-xirnaanta diiwaangelinta had iyo jeer waa kuwa aan soo jeediyay cutubkii hore ee hagaha, oo ah in la raaco Idaacadaha Bulshada ee DreamHack.
Markii isku xirka isdiiwaangelinta Dhacdada soo socota ee Fortnite ee ku saabsan dariiqyada kala duwan ee bulshada, waad ka furan kartaa labadaba kombiyuutarka iyo aaladaha moobaylka. Bogga degitaanku wuxuu ka koobnaan doonaa a Foomka Google oo leh goobo macluumaad oo caadi ah si loo dhammaystiro: magaca, magaca awoowe, naanays Fortnite, cinwaanka guriga, wadanka uu ka soo jeedo iwm Waddo dhammaystiran sax ah oo run ah dhammaan meelaha macluumaadka ka dibna sii wad bogagga xiga adoo riixaya badhanka ku habboon Xiga ku yaal salka hoose.
Dhamaadka diiwaangelinta, waxaa lagugu hagaajin doonaa bogga munaasabadda ee websaydhka Ciyaaraha Epic, oo ay heli karaan oo keliya ciyaartoy diiwaangashan. Halkan waxaad ku arki doontaa tirada tartamayaasha guud ahaan, ka xogta halka ay xafladu ka dhacayso iyo console kaas oo aad kula tartami karto: kombiyuutarka shaqsiga, Xbox One / X / S, Cayaaraha 4/5, Nintendo wareegga ama sidoo kale Aaladaha gacanta ee Android / iOS / iPadOS.
Haddii tartanka kelida ah ee Fortnite uusan ahayn mid aad jeceshahay, waa inaad ogaataa in DreamHack uu bilaabay isbeddel lama filaan ah: dhacdooyin taxane ah oo la yiraahdo Duets. Tani waa fursadda ugu fiican ee lagula tartami karo saaxiibkaa ama saaxiibkiis isla markaana aad tusto qofka aad tahay. Hadaad rabto inaad ogaato sida loo diiwaan geliyo DreamHack Duos, waxaad jawaabta ka heli doontaa sadarada soo socda.
Si la mid ah tartamada Fortnite ee loo abaabulo soloistayaasha, tartamada labada xiddig sidoo kale waxay u baahan yihiin diiwaangelin hore iyo xisaab Epic Games. Markaad abuurto oo aad ansaxiso koontadaada Ciyaaraha Epic, waa inaad sugto inta lagaalaxirayo si loo diiwaangeliyo dhacdada Duos.
Sida lagu xusay cutubkii hore, waxaan si adag kuugu soo jeedinayaa inaad raacdo mid ka mid ah Bogagga Bulshada ee DreamHack, si aan u seegin cusbooneysiinta, oo ay ku jiraan casuumaadda dadweynaha ee isdiiwaangalinta tartanka soo socda. Markuu iskuxirka duos-ka Duos si furan loo wadaago, dhagsii URL-ga la daabacay oo waa lagu tusi doonaa a Foomka Google in lagu buuxiyo daryeel.
Farqiga kaliya ee weyn ee udhaxeeya foomka diiwaangelinta ee tartanka kaligiis ayaa ah in codsigan diiwaangelinta waxaad kaheleysaa goob qoraal ah oo aad si sax ah ugu qeexeyso naanaysta lammaanahaaga laga bilaabo Fortnite. Lammaanahaagu waa inuu sidaas oo kale sameeyaa inta ay diiwaangelintu socdaan oo ay galaan naanaystaada 'Fortnite' si aad u ansaxiso lammaanahaaga (ama Duos) waqtiga xog ururinta.
Markaad dhammaystirto foomka diiwaangelinta, waxaa lagu tusi doonaa URL-ka bogga la xiriira dhacdada Duos ee lagu martigelin doono websaydhka Ciyaaraha Epic - halkaas adiga iyo lammaanahaagu waxaad awood u yeelan doontaan inaad wada aragtaan dhammaan faahfaahinta dhacdada, sida sida xogta tartamada, semi-finalka iyo finalka iyo tirada guud ee kaqeybgalayaasha.
Halkaa marka ay marayso, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad udiyaar garowdo la-tartamidda lamaanaha kale ee tartameyaasha kuwaas oo sida ugu fiican isugu dayi doona inay kaa hor istaagaan inaad guuleysato. Nasiib wanaagsan!